नेकपा विवादका बारेमा जन साँस्कृतिक महासंघ अध्यक्ष खगेन्द्र राईकाे कुरा - Halesi Khabar
१५ मंसिर २०७७, सोमबार १९:१२ ।
केन्द्रमा नेकपाकाे विवाद छचल्किएकाे छ। सबैले हदैसम्मकाे संयमता अपनाउनु पर्ने राय सुझावहरु अाउनु पर्ने बेला हाे याे । तर तल्लाे तहकाे कार्यकर्ताहरु समेत पक्ष विपक्षमा तर्क वितर्क गरिरहेका बेला जनसाँस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र राईले भने सामाजिक सञ्जालमा यस्ताे अभिव्यक्ती राखेका छन्।
पढाैँ उनकाे स्टाटस जस्ताकाे तस्तै :-
साथीहरू हामी अाफै एक अर्कामा अपशब्द प्रयाेग गर्दै गालीगलाैज गर्ने काममा समय र श्रम खर्च नगराैं, यसले एकताकाे भावनामा चाेट पुराउछ। बरू याे ऐतिहासिक एकता सुदृढ र दीर्घकालीन बनाउन सबै नेता, कार्यकर्ता, समर्थक शुभचिन्तक एक भएर लागाैं।पार्टीका श्रद्वेय अध्यक्षद्वयले अा-अाफ्ना विचार लिखित रूपमा पार्टीकाे सचिवालयमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएकाे छ। त्यस विषयमा सचिवालयका कमरेडहरू बाेल्नु हुनेछ। त्याे तहमा समाधान नभए स्थायी समितिमा जानेछ र साेही समितिका कमरेडहरू बाेल्नु हुनेछ। त्यहाँ समाधान हुन नसके केन्द्रीय कमिटिमा अाउनेछ र त्यहाँ छलफल हुनेछ र केन्द्रीय समितिका कमरेडहरूले समाधानका उपाय अवश्य निकाल्नु हुनेछ। नभए महाधिवेशन छदैछ जसले निर्णय अवश्य गर्नेछ। यहीँ विधि र पद्वतिले पार्टी एकता कायम राख्नेछ र अझ सुदृढ गर्नेछ। अब कुनै नेताले फुटकाे घाेषणा गर्दैमा काेही पछि लाग्दैन याे पूर्व एमाले वालाकाे लागि २०५४ साल हाेइन। तत्कालीन नेकपा माअाेवादीका कमरेडहरू पनि फुटकाे श्रृङ्खलाबाटै गुज्रनु भएकाे छ। तत् तत् बेलामा फुट्ने फुटाउने, १ नं, २ नं भ्रष्टाचारी घाेषणा गर्ने-गराउने नेतृत्व वर्ग अझै नेतृत्वमा नै हुनुहुन्छ र फुटकाे पीडा हामी सबैले भागिसकेका छाै। फुटकाे क्षति पुरा गर्न पुरै २० वर्ष लाग्याे। यसकारण पार्टीकाे माथिल्लो कमिटिमा छलफलकाे प्रक्रियामा रहेकाे विषयमा तलका हामीहरू गालि गलाैजमा उत्रेर अाफ्नाे जीउकाे छाराे अाफै उडाउनु किन? अा-अाफ्नाे तहकाे कमिटिमा अाए पछि सभ्य शिष्ट भाषामा अा-अाफ्नाे विचार राखाैंला र पार्टी एकीकरणलाई मजबुत र सुदृढ बनाउन याेगदान गराैला। अन्यथा भैगएछ भने पनि हामीलाई गालीपुराण लाउनु कस्ले पाे सक्छ र? सबैकाे सद्बुद्वि र विवेकले उचित समयमा उचित कार्य गर्ने नै छ भन्ने अपेक्षा राख्नु अर्घेल्याइँ नहाेला । मलाई त यस्ताे लाग्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै हटाउने प्रचण्ड–माधव समूहको निर्णय
वैवाहिक बन्धनमा बाँधिए मुख्यमन्त्री राई र मोडल जाङ्मु शेर्पा
१. प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा देशकै दोस्रो लामो राप्ती पुल उद्घाटन, लालमटियामा जनसभालाई सम्बोधन
२. प्रचण्ड–माधव समूहद्धारा तेस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम घोषणा
३. अदालतको फैसला ढिलो भए चुनाव पछाडि सर्न सक्छ : गृहमन्त्री थापा
४. ओली समूहको जनसभा काउण्टर जवाफ नभइ स्थिरताका लागि हो : ईश्वर पोखरेल
५. प्रधानमन्त्री ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै हटाउने प्रचण्ड–माधव समूहको निर्णय
६. वैवाहिक बन्धनमा बाँधिए मुख्यमन्त्री राई र मोडल जाङ्मु शेर्पा